ezaposwa ngomhla 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Pyridoxal Hydrochloride okanye i-vitamin B6 Ngaba ivithamini enyibilikiswa ngamanzi efumaneka rhoqo ekutyeni. Isetyenziselwa ikakhulu njengesongezelelo sokutya.
Imithombo eqhelekileyo ye-pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ekudleni kubandakanya iinkozo, inkukhu / ikarikuni, imifuno kunye neziqhamo.
2. Kutheni le nto abakhi bomzimba badinga iivithamini- pyridoxine Hydrochloride?
Njengomakhi womzimba, uyakufuna izakhamzimba ezingaphezulu kunalezo zokuphila ngokuhlala phantsi. I-B-6 pyridoxine hydrochloride ibaluleke kakhulu kuwe kuba iyimfuneko kwimisipha ye-phosphorylase, umsebenzi onxulunyaniswa ne-glycogen metabolism. Ngamafutshane, udinga ivithamini B6 kwisetabolism esempilweni. I-Vitamin B6 inyusa imisebenzi yee-enzyme ezithatha inxaxheba ekonakaleni kweprotein.
Iziphumo zePyridoxine hydrochloride emzimbeni inento yokwenza nendima yayo kwiprotein metabolism. Kungenxa yoko le nto xa uyisebenzisa, kuyacetyiswa ukuba udle isidlo sakusasa seprotein ngaphambi kokuba uye ejimini. Unokuthatha ukutya okune-protein ngexesha lokufunda ngaphambi kwexesha, ngelixa uqeqesho, nasemva koqeqesho naphambi kokuba ulale.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uyakutyeshela okunye ukutya. Umzimba wakho ufuna ezinye iiminerali ezifanelekileyo ukuze usebenze ngokukuko kwaye ukukhusele kwizifo.
Ufuna amandla amaninzi ngexesha lokuphuma. IPyridoxine hydrochloride izuzisa umzimba wakho ngokwandisa izinga lokutsha kweecarbohydrate kwiiseli zakho. Oku kuqinisekisa ukuba ufumana amandla aneleyo.
Kwi-1939, i-Folkers kunye neHarris bagqiba ubume be-pyridoxine. Kwiminyaka emithandathu kamva, uSnell wabonisa ukuba i-B6 ineendlela ezimbini: i-pyridoxamine kunye ne-pyridoxal. Igama I-Pyridoxal Hydrochloride yeza ngenxa yokuba ivithamini B6 yayicwangcisiwe njenge-pyridine.
Phakathi kweevithamini ze-B, iPyridoxal Hydrochloride yeyona ibaluleke kakhulu kwimpilo yomzimba nengqondo yabakhi bomzimba. Inceda ekukhuleni kweeseli ezintsha, icacisa IPyridoxine hydrochloride yokwakha umzimba ubuchule. I-B6 ikwanceda ekulinganiseni i-potassium kunye ne-sodium, nasekuqulunqweni kwe-asidi ye-niticic, iDNA kunye ne-RNA eyinxalenye yayo.
Ukusilela kwePyridoxal Hydrochloride kukhokelela kukoyika, ukuba nochuku, ukuqaqanjelwa bubuthongo, ukuba buthathaka, ulwimi oludlamkileyo, iinzipho ezijijekileyo, isifo samathambo kunye ne-osteoporosis.
Nangona kunjalo, ngokophando olunye, idosi yangoku yePyridoxal Hydrochloride ecetyiswayo kubantu abasebenzayo nguRhulumente wase-US ayonelanga.
Oku kuthetha ukuba abo bathintela amaqela okutya okanye bathintele iikhalori banokuba semngciphekweni wokusilela. Ke ngoko, abanokuxhamla kwiziphumo ze-pyridoxine hydrochloride ukuba bathatha kuphela idosi njengoko kucetyisiwe ngurhulumente.
Ngokusekwe kwiziphumo zolu phando, kuya kuba bubulumko ukubonisana nengcali yakho yokhathalelo lwempilo ukunceda ufumane eyona / efanelekileyo ye-pyridoxine hydrochloride yokwakha umzimba.
I-B-6 pyridoxine hydrochloride idlala indima ebalulekileyo kulawulo lweemoods. Kungenxa yokuba yenza ii-neurotransmitters ezilawula iimvakalelo. I-Pyridoxine hydrochloride yokukhulelwa ibaluleke kakhulu kwabasetyhini abanemvakalelo okanye abaneemvakalelo ezibangelwa kukungalingani kwehomoni ngexesha lokukhulelwa.
Olunye uphononongo olubandakanya abantu abadala abali-156 abanokuphazamiseka kwengqondo okuthobekileyo kunye namanqanaba aphezulu egazi le-homocysteine ​​bafumanisa ukuba umlinganiselo ophezulu we-pyridoxine hydrochloride wehlisa amanqanaba e-homocysteine ​​egazini kwaye unciphise ukwehla kwamalungu athile engqondo asemngciphekweni we-Alzheimer's.
Enye yezibonelelo ze-pyridoxine hydrochloride kukuba inokusetyenziselwa ukunyanga iimpawu ze-PMS kubandakanya ukuba nochuku, uxinzelelo kunye noxinzelelo. Abaphandi bakholelwa ukuba ivithamini B6 inokunyanga ezi mpawu kuba idala ii-neurotransmitters ezinceda kulawulo lweemood.
Kwiminyaka emininzi, i-vitamin B6 isetyenziselwe ukunyanga isicaphucaphu kunye nokugabha kwabasetyhini abakhulelweyo. Kwakhona isithako seDiclegis, isilwanyana esisetyenziselwa unyango lokugula kwasekuseni. Le iphakathi kwezibonelelo eziphezulu ze-pyridoxine hydrochloride yabasetyhini abanengxaki kule meko ngexesha lokukhulelwa kwabo.
Idosi yasekunene ye-pyridoxine hydrochloride ekhulelweyo iyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye. Uphononongo olubandakanya abasetyhini abakhulelweyo abangama-342 bafumanisa ukuba idosi yemihla ngemihla ye-30mg yevithamini yanciphisa ngokumangalisayo isicaphucaphu kwiintsuku nje ezintlanu emva kokuqala konyango
I-Pyridoxine hydrochloride idlala indima enkulu ekuthinteleni ukuvalwa kwemithambo kungoko kunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo. Ukuba unamanqanaba asezantsi e-vitamin B6, umngcipheko wokufumana isifo sentliziyo uya kuphindeka kabini xa kuthelekiswa nalawo anamanqanaba aqhelekileyo evithamini egazini. I-Vitamin B6 inciphisa amathuba okuvaleka kwemithambo ngokunciphisa amanqanaba e-homocysteine ​​egazini.
Oku mhlawumbi kubaluleke kakhulu Ukusetyenziswa kwepyridoxine hydrochloride enikiweyo ukwanda komhlaza namhlanje. Ukuba ufumana ngokwaneleyo iPyridoxine hydrochloride, umngcipheko wakho wokukhulisa iintlobo ezithile zomhlaza uya kuncitshiswa. Isizathu soku asicacanga kodwa abaphandi bakholelwa ukuba kuhambelana nokukwazi kwe-B6 yokulwa nosulelo olubangela iimeko ezingapheliyo ezinje ngomhlaza.
Kuphando oluthile olwenziwe ukumisela ubudlelwane phakathi kwamanqanaba e-pyridoxine hydrochloride kunye nomhlaza webele, kwafunyaniswa ukuba amanqanaba afanelekileyo e-B6 egazini anciphisa umngcipheko womhlaza wamabele, ngakumbi kubafazi abasemva kwemiphunga.
Vitamin B6 inceda ukuthintela izifo zamehlo, ngakumbi ezo zinxulumene nokwaluphala-ezinxulumene nobudala be-macular degeneration (AMD). Xa unamanqanaba aphezulu e-homocysteine ​​ehamba egazini lakho, uya kuba nomngcipheko ophezulu wokuphuhlisa i-AMD. IPyridoxine hydrochloride inceda ekunciphiseni amanqanaba aphezulu e-homocysteine ​​egazini kungoko kunciphisa umngcipheko we-AMD.
Olunye uphando ludibanise iingxaki zamehlo kumanqanaba asezantsi egazini; ngakumbi iingxaki zamehlo ezikhokelela ekuvaleni kwemithambo edityaniswe kwi-retina. Inqanaba eliphantsi le-pyridoxine hydrochloride ikwanxulunyaniswa nokuphazamiseka kweretina.
IPyridoxine hydrochloride ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa ngabakhi bomzimba. Kukhuselekile nakwezonyango. Nangona kunjalo, ineziphumo ezahlukeneyo kubantu abohlukeneyo Ezinye zeempembelelo ze-pyridoxine hydrochloride zibandakanya:
Ukuba ufumana iziphumo ezibi ze-pyridoxine hydrochloride emva koko kuya kuba ngcono ukuba ufune unyango.
Amanani aphakamileyo kakhulu ePyridoxal Hydrochloride anokubangela ukuphazamiseka kwemithambo-luvo. Ezi ngxaki zinokuthi zikhokelele kwiingxaki zozinzo kunye nokulahleka kwemvakalelo emilenzeni. Kukho neengxelo ukuba iidosi eziphezulu ze ipyridoxine hydrochloride kunokukhokelela ekuphenduleni kolusu. Ngethamsanqa, xa uyeka iidosi eziphezulu, uya kuphola ngokupheleleyo.
Xa ukwipilisi yePyridoxal Hydrochloride, akufuneki uyeke, qalisa ukuyisebenzisa ngokudibeneyo nelinye ichiza, okanye utshintshe idosi ngaphandle kwemvume yomboneleli wakho wezempilo.
Nangona iPyridoxal Hydrochloride ingenalo unxibelelwano olunzulu okanye olubi namanye amachiza, kuhlala kufanelekile ukuba ulumke.
Kanye njengeLuminal, iPyridoxal hydrochloride (65-22-5) uyaphula le khemikhali ukuyikhupha emzimbeni wakho. Ukuthatha indibaniselwano ye-Dilantin kunye ne-Pyridoxal Hydrochloride kuya kunciphisa ukusebenza kwangaphambili komzimba wakho. Oku kunokunyusa amathuba okuba ufumane ukuxhuzula.
I-Pyridoxal Hydrochloride inonxibelelwano oluncinci kunye neziyobisi ezingaphezu kwama-70 ezahlukeneyo. Ke, ngaphambi kokusebenzisa nasiphi na isiyobisi ngokudibeneyo, qiniseka ukuba uqhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo.
Izibonelelo zePyridoxal Hydrochloride kubakhi bomzimba zininzi. Ayisibaakhi bomzimba kuphela, iimbaleki zonke ezinzulu kufuneka zibe nale vithamini kwisitokhwe. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyisebenzise ngokuhambelana ngokungqongqo needosi ezikhuthazwe ziingcali zonyango.
IFlibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesondo	I-Synephrine HCL Powder-Isitshisi esinamafutha kunye nezixhobo zokunciphisa umzimba